The Hurt Locker (2008) | MM Movie Store
ဒီကားကတော့ ၂၀၀၈ ခုနှဈကထှကျခဲ့ပွီး ကွညျ့ရှုသငျ့တဲ့ War fil တှထေဲမှာ ထိပျတနျးနရောက ပါဝငျပါတယျ။
၂၀၀၈ Academy award မှာ ဒါရိုကျတာ ဂြိမျးကငျမရှနျးရဲ့ Avatar ရုပျရှငျကို ကြျောလှနျပွီး Nomination9မှာBest Director အပါအ၀ငျ Oscarsတှေ ၆ ခုတိတိ သိမျးပိုကျခဲ့တဲ့ကားဖွဈပါတယျ။
Marvel ဇာတျကောငျ စူပါစတားတှဖွေဈတဲ့ Hawkeye and Falcon နရောမှာသရုပျဆောငျခဲ့တဲ့ Jeremy Renner နဲ့ Anthony Mackie တို့ကလညျးအတှဲညီညီပါဝငျထားပါတယျ။
ကမ်ဘာပျေါမှာ စဈတိုကျရတာ အန်တရာယျအရှိဆုံးအလုပျတဈခုဆိုရငျ စဈမွပွေငျမှာ ဗုံးရှငျးလငျးရေးအလုပျကလညျးဒုတိယအန်တရာယျအရှိဆုံးဖွဈပါတယျ။ US နဲ့ အရှအေ့လယျပိုငျးနိုငျငံတဈခုဖွဈတဲ့ အီရတျစဈမွပွေငျမှာ EOD ဆိုတဲ့ဗုံးရှငျးလငျးရေး အဖှဲ့ရှိပါတယျ ။
အဲ့ဒီအဖှဲ့ရဲ့ ခေါငျးဆောငျဟာ မတျောတဆ လုပျကဖောကျခှဲမှုမှာ သဆေုံးသှားတဲ့အခါ သူ့နရောကို တပျကွပျ ဝီလီယံ ဂြိနျး ဟာ အစားထိုးရောကျရှိလာပါတယျ။ ဂြိနျးဟာ တဇှတျထိုးလုပျတတျတဲ့ ဂှစာတဈယောကျဖွဈပမေယျ့ ကြှမျးကငျြတဲ့ ဗုံးရှငျးလငျးရေးတပျသားလညျးဖွဈပါတယျ။
သူ့ရဲ့ ပုံစံအတိုငျး EOD အဖှဲ့ဝငျဟောငျးတှနေဲ့ ကတောကျကဆတှဖွေဈလာပါတယျ ။ သူနဲ့ အဖှဲ့ကွားက ဆကျဆံရေးကရော ဘယျလိုဖွဈလာမလဲ ??
အီရတျမှာကော ဗုံး disposal mission တှကေို ဘယျလိုသကျစှနျ့ဆံဖြားလုပျသှားမလဲဆိုတာကိုတော့ မိနဈတိုငျးကိုမကျြတောငျမခတျကွညျ့ရှုသှားဖို့ အကွုံပွုလိုကျရပါတယျ။
ဒီကားကတော့ ၂၀၀၈ ခုနှစ်ကထွက်ခဲ့ပြီး ကြည့်ရှုသင့်တဲ့ War fil တွေထဲမှာ ထိပ်တန်းနေရာက ပါဝင်ပါတယ်။
၂၀၀၈ Academy award မှာ ဒါရိုက်တာ ဂျိမ်းကင်မရွန်းရဲ့ Avatar ရုပ်ရှင်ကို ကျော်လွန်ပြီး Nomination9မှာBest Director အပါအ၀င် Oscarsတွေ ၆ ခုတိတိ သိမ်းပိုက်ခဲ့တဲ့ကားဖြစ်ပါတယ်။
Marvel ဇာတ်ကောင် စူပါစတားတွေဖြစ်တဲ့ Hawkeye and Falcon နေရာမှာသရုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့ Jeremy Renner နဲ့ Anthony Mackie တို့ကလည်းအတွဲညီညီပါဝင်ထားပါတယ်။
ကမ္ဘာပေါ်မှာ စစ်တိုက်ရတာ အန္တရာယ်အရှိဆုံးအလုပ်တစ်ခုဆိုရင် စစ်မြေပြင်မှာ ဗုံးရှင်းလင်းရေးအလုပ်ကလည်းဒုတိယအန္တရာယ်အရှိဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ US နဲ့ အရှေ့အလယ်ပိုင်းနိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်တဲ့ အီရတ်စစ်မြေပြင်မှာ EOD ဆိုတဲ့ဗုံးရှင်းလင်းရေး အဖွဲ့ရှိပါတယ် ။
အဲ့ဒီအဖွဲ့ရဲ့ ခေါင်းဆောင်ဟာ မတော်တဆ လုပ်ကေဖာက်ခွဲမှုမှာ သေဆုံးသွားတဲ့အခါ သူ့နေရာကို တပ်ကြပ် ဝီလီယံ ဂျိန်း ဟာ အစားထိုးရောက်ရှိလာပါတယ်။ ဂျိန်းဟာ တဇွတ်ထိုးလုပ်တတ်တဲ့ ဂွစာတစ်ယောက်ဖြစ်ပေမယ့် ကျွမ်းကျင်တဲ့ ဗုံးရှင်းလင်းရေးတပ်သားလည်းဖြစ်ပါတယ်။
သူ့ရဲ့ ပုံစံအတိုင်း EOD အဖွဲ့ဝင်ဟောင်းတွေနဲ့ ကတောက်ကဆတွေဖြစ်လာပါတယ် ။ သူနဲ့ အဖွဲ့ကြားက ဆက်ဆံရေးကရော ဘယ်လိုဖြစ်လာမလဲ ??
အီရတ်မှာကော ဗုံး disposal mission တွေကို ဘယ်လိုသက်စွန့်ဆံဖျားလုပ်သွားမလဲဆိုတာကိုတော့ မိနစ်တိုင်းကိုမျက်တောင်မခတ်ကြည့်ရှုသွားဖို့ အကြုံပြုလိုက်ရပါတယ်။